IsiShayina Book of Changes - lingomunye wemibhalo eminingi yasendulo. Lokhu akukhona nje indatshana yokubhula. It has a ukuhlakanipha profound ifilosofi yokuphila futhi isiko okungokomoya kwabantu. Kuwo wonke umlando China omude le ncwadi ngeke kube nethonya elikhulu ekuphileni kwansuku nokuphila ngayinye izakhamuzi zayo.
IsiShayina Book of Changes, noma I Ching, hhayi kuphela liphendula imibuzo, kukhombisa indlela okunika ngayo ukwenza umuntu ongcono esimweni esithile, ukuthi, umnikeza ilungelo lokukhetha futhi usiza aphathe nezinkinga zokuphila philosophically. Nakhu ukuthi lihluke kanjani kwezinye izinhlobo zokubhula.
Ngokusho kwelinye legend yamaShayina yasendulo, Encwadi Izinguquko ezenziwe umbusi Fu Xi, owayehlala e-3rd yeminyaka BC. e. Ngo osekelwe kuyo - imfundiso ethi konke emhlabeni kushintsheke kanye nesimiso sobuntu sokuhlalisana ngokuthula.
Thina ukuqagela Encwadi Izinguquko amakhulu eminyaka, isiShayina hhayi kuphela. Ukuze ngokuhlakanipha kwakhe ayephatha ngayo abantu, evela emazweni amaningi, abacebile nabampofu, abantu osesikhundleni and abalimi. Abanye baye bazama ukuthola izimpendulo, cela enye incwadi ukuthola ukuthi uqhubeke kanjani ezimweni ezithile, futhi abanye wabheka wayishayela enelukuluku. Kodwa esimweni ngasinye amaShayina Book of Changes iye yakufakazela ukuthi kungasiza umuntu ngisho isimo esinzima kakhulu. Yingakho ibizwa ngakho ohlonishwayo eChina ngalé kwemingcele yayo. Namuhla, amaShayina Book of Changes ube kuyo yonke imikhaya, ngisho abampofu. Ukuze Chinese wakhe zimi baseYurophu ukulalela okushiwo iBhayibheli noma Koran amaSulumane. Kukholakala ukuthi incwadi kuletha inhlanhla.
Classical Chinese Book of Changes linezinhlamvu 64. Zibizwa ngokuthi ama-hexagrams, njengoba umlingisi ngamunye yakhiwa bands eziyisithupha munye trigrams. Njalo isici kungaba okuqhubekayo noma ephukile. Umugqa ngqo limelela isimo umsebenzi, ukukhanya, Yang kuphazamisekile futhi, kunalokho, kuyinkomba yin - lobumnyama passivity ekubhuleni. Trigram ehlanganisa kwemigqa eqinile - Yang, ukukhanya ngobugebengu - Yin isithunzi.
Ngakho, nayikuthi liphethe imigqa emibili okuqinile futhi ephukile, ibizwa ngokuthi ikakhulukazi ukukhanya trigram izici ezimbili iphukile okuqinile - isithunzi. I hexagrams ungakwazi nawo abusa yiluphi uhlobo Yang, noma Yin. Zonke inhlanganisela zibaliwe futhi ube amagama abo. Ngamunye hexagrams oluhambisana inani elithile. Kubonisa indlela isimo samanje futhi umphumela wayo kungenzeka, uma umbhuli Thola amathiphu Izincwadi. Zonke imibhalo achazayo kukhona indawo ebanzi kakhulu. Lokhu kubonisa ukuthi zo zaseChina kucatshangwe ngokucophelela izindlela kungenzeka kuzo zonke isimo. Yilokho uhlukile Chinese Book of Changes.
Ukuqagela kuso Thumela Prince nge zemali ezintathu ezifanayo. Eagle kuyinto Ian, kubalulekile ukuba udwebe umugqa okuqhubekayo, imisila - Yin, ngokulandelana, umugqa eziphukile idwetshwa. EChina, ngokuvumelana Book of Changes ukubhula - elalenziwa nokusetshenziswa izinti olukhethekile Yarrow. BaseYurophu ejwayele ukubhula okulula usebenzisa zemali. Ngaphambi kweseshini udinga ugxile kusihloko. Ukuze lamukele ke, bese kuphela ukuqala baphonse zemali. Bona babe unyakaziswa izikhathi eziyisithupha. Uma ilungelo zemali ezimbili noma ezintathu walala ukhozi up - udwebe umugqa okuqhubekayo, umqulu kwemisila emibili noma emithathu - ngakanye.
Kumelwe sikhumbule ukuthi bakha hexagram kusukela phansi kuze, okungukuthi, udwebe umugqa owodwa ngaphezu kwamanye. Nakuba eminye imithombo ozama ukufakazela okuphambene. Uma konke imikhakha eyisithupha basondela, le hexagram kumele ngobugebengu ku izingxenye ezimbili bese ulithole inombolo etafuleni. Manje ungafunda ukuthi bazokutshela Chinese Book of Changes. Ukuhunyushwa inhlanganisela ngamunye yakhiwa izingxenye ezimbili. Impendulo yokuqala yombuzo sakwaGadi, kanti eyesibili iqukethe iseluleko sendlela liziphathe kulesi simo.
Lapho ukuqagela on the Book of Changes badinga ukulandela imithetho embalwa:
Ungabuzi umbuzo ofanayo, ngisho noma impendulo hhayi okuningi.
Ungafaki imibuzo silly like "Malini 2 + 2?", Hlola ncwadi.
Kwesinye isimiso somhlangano, ngaphandle kwesidingo ahlekise umbuzo ezingaphezu kweyodwa ukubuza akuyona.
Ukubhula akufanele kube njalo.
Ungayisebenzisi incwadi uma icebo lakhe siqondiswe bese lokho kulimaza abanye.
IsiShayina Book of Changes singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela induduzo nasezimweni ezinzima futhi babe umthombo ugqozi kuwo wonke ubani onesibindi ukulandela iseluleko sakhe.
Lipstick Beige: Silingane isithombe. Indlela ukukhetha lipstick beige
Nokuvuthwa ezizalwa ngaphambi kwesikhathi umzanyana: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
ECE (Economic Commission for Europe): Ukwakheka, imisebenzi, imithetho,
Ihhotela Carribean Ihhotela Soma Bay 5: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa